Horudhac: Manchester United vs Bournemouth… (Red Devils oo soo dhoweynaysa galabta Kooxda ku jirta kaalimaha looga laabto horyaalka) – Gool FM
(Manchester) 04 Luulyo 2020. Kooxda ku jirta kaalimaha looga laabto horyaalka Premier League ee Bournemouth ayaa u safreysa galabta oo Sabti ah garoonka Old Trafford halkaasoo ay kula ciyaarayso naadiga Manchester United oo doonaysa inay xilli ciyaareedkan ku dhammaysato afarta sare ee horyaalka.
Bournemouth ayaa fadhisa kaalinta 19-aad ee kala sarreynta Premier League, waxaana ay leedahay 27-dhibcood, iyadoo hal kaalin ka hooseysa booska badbaadada, halka Man United ay labo dhibcood ka dambeyso kooxda kaalinta afaraad ku jirta ee Chelsea, kaddib markii ay uruursatay 52-dhibcood, 32 kulan oo ay ciyaartay horyaalka EPL.
Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa qiray inuu isbedel ku sameyn doono shaxdiisa safka hore si uu nasiino u siiyo xiddigihiisa qaar ka mid ah.
Daafacyada Axel Tuanzebe iyo Phil Jones ayaa weli dhaawac kaga maqan Man United, halka da’yarka Ethan Laird loo soo dallacsiiyey shaxda kooxda koowaad.
Tababaraha Bournemouth ee Eddie Howe ayaa sheegay inuu u baahan yahay inuu hubiyo taam ahaanshaha labo ka mid ah xiddihiisa oo uusan magacaabin.
Gooldhaliyaha ugu sarreeya kooxda ee Callum Wilson ayaan la heli doonin kulankan, maadaama uu soo dhammaysan doono labo kulan oo ganaax ah.
>- Manchester United ayaa guuldarro la’aan ah marka ay garoonkeeda kula ciyaareyso kooxda Bournemouth tartammada oo dhan, iyagoo guuleystay todobo kulan, isla markaana barbaro galay mid kale.
>- Si kastaba ha noqotee, Bournemouth ayaa u diyaar garoobeysa inay dhammeystirto inay horyaalka hore iyo gadaal u maraan oo ay minin iyo marti uga adkaadaan Manchester United markoodii ugu horreysay kaddib guushii 1-0 ee ay kaga gaartay garoonkeeda bishii November.
>- Man United ayaa guuldarro la’aan ah 15 kulan tartammada oo dhan, waxa ay guuleysteen 11 kulan, iyagoo barbaro galay 4 kulan oo kale, waana guuldarro la’aantoodii xiriirka ahayd ee ugu dheereyd tan iyo markii aan 17 kulan oo isku xigta la garaacin intii u dhexeysay November 2016 iyo January 2017.
>- Waxa ay Man United raadinaysaa inay garoonkeeda ku adkaato afar kulan oo xiriir ah horyaalka, iyadoo aan gool laga dhalin markeedii ugu horreysay tan iyo markii lix kulan oo isku xiga ay ku badisay gurigeeda iyadoo aan gool laga dhalin bishii October sanadkii 2017.
>- Red Devils ayaa shabaqeeda gool ka ilaashan karta markeedii lixaad oo xiriir ah iyadoo garoonkeeda ku dheeleysa tartammada oo dhan markii ugu horreysay tan iyo bishii October illaa December sanadkii 2015.
>- Man United ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay siddeed kulan 13-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka, waana in hal ka badan 40-keedii kulan ee ugu horreeyey oo uu kooxda hoggaamiyey Tababare Ole Gunnar Solskjaer.
>- Mason Greenwood ayaa dhaliyey lix gool xilli ciyaareedkan 2019-20, waa ciyaaryahanka ugu badan ee 18 sano jir ah ama ka yar ee sidaas ka sameeya Premier League tan iyo Wayne Rooney oo sagaal gool u dhaliyey kooxda Everton kal ciyaareedkii 2003-04.
>- Bruno Fernandes ayaa gacan ka geystay siddeed gool siddeediisii kulan ee ugu horreeyey oo uu horyaalka u ciyaaray Man United, waxa uu dhaliyey shan gool, isagoo caawiye ka ahaa saddex kale.
>- Bournemouth ayaa guuldarro la kulantay 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee horyaalka Premier League ay ku soo ciyaartay meel ka badan garoonkeeda.
>- Cherries ayaa la dhibtoonaysa 16 guuldarro 21 kulan oo horyaalka ah oo ay ku jiraan mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Kooxda Tababare Eddie Howe ayaa dhexda kaga jirta todobo kulan oo xiriir ah oo ay guuldarro ka soo qaadanayeen kulammada horyaalka ee ay ku ciyaaraan meel ka baxsan garoonkooda.
>- 15 kulan oo horyaalka ah oo isku xiga ayay shabaqeeda gool ka ilaashan la’dahay Bournemouth, waana rikoorkeedii ugu dheeraa tan iyo markii ay 21 kulan oo xiriir ah ay shabaqeeda gool ka ilaashan weysay intii u dhexeysay April iyo October ee sanadkii 1994-kii.